Kedu otu mmalite si amalite ntuputa ha na ichu nta Ahia | Martech Zone
Usoro mmalite maka mmalite na ụlọ ọrụ ọ bụla bụ ihe zuru ụwa ọnụ: gbagote nnukwu echiche, mee ụdị ngosi ya iji gosipụta, dọta ụfọdụ ndị na-etinye ego wee nweta uru ozugbo ịbatara ahịa na ngwaahịa agwụla. N'ezie, dịka ụlọ ọrụ si malite, otu a ka e si nweta ngwa ọrụ. Ebumnuche nke ọgbọ ọ bụla iji kpughee ụzọ ọhụrụ iji bido ịmalite ọha mmadụ.
Oge ndị gara aga tụkwasịrị obi site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ, nzipu ozi na mgbasa ozi TV na redio iji malite ngwaahịa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị ahụ ka dị taa, ọhụụ dị mkpa nke oge a ka ndị mmalite taa wee nwee ike ịpụta ebe na ahịa na-ekwo ekwo.
N'ajụjụ ọnụ nke 2016 na Groove's Alex Turnbull, onye na-ahụ maka ngwaahịa na onye isi ala Ryan Hoover kwupụtara nkà ihe ọmụma ya, si n'aka nna ya. Chọta oghere, ma jupụta ya
Hoover chọtara nnukwute oghere ma weta ụzọ iji mejupụta ya. Ebe nzukọ maka ndị nwere mbido, saịtị ahụ na-adabere n'okwu ọnụ iji wusie ike ma ọ bụ belata ikpe ọ bụla site na elu ma ọ bụ nkwenye sitere n'aka ndị ọrụ. Y’oburu n’inweta ego di elu iji kwusi ndepụta a na-abịa, ebe mmalite niile bido, ị ga-aga n’ihu saịtị ahụ na ndepụta egosipụtara.
Uzo nke ngwa ahia enyere ha bu ebe nile. Ndị nkuzi ga-anụ ụtọ ekwentị na ngwa mkpanaaka, ebe akwụkwọ na ihe ndị ọzọ dị maka ịtụle. Ọbụna ebe Gbọ mmiri ndị iro gị ewute bidokwa. N'ime awa 24 nke mmalite webụsaịtị ahụ kụrụ mgbasa ozi mmekọrịta, mmasi ahụ mere ka onye okike tinye weebụsaịtị dị maka ire ere.
Saịtị ahụ na-ahọrọ igosipụta mmalite nke 'ọhụrụ' - ọ bụghị naanị mbọ sitere n'aka ndị mmepe oge izizi, mana ihe emelitere nke ukwuu sitere na ụlọ ọrụ ndị ama ama. Ha na-ekwekwa ka ndị okike nwee ihe ndị amachaghị ka ha biputere mmalite ha, agbanyeghị na ihe a abụghị nke ọhụụ.
Ngwa ndị edegharịrị aha ha nwekwara ike iru eru ka edepụtara ha. Ọ bụrụ na ị bụ karịa onye edemede, mgbe ahụ Hchụ nta ngwaahịa nwere ike ọ gaghị abụ maka gị, ebe saịtị ahụ anaghị anabata isiokwu na ederede blog. Anabataghị ọrụ nkwekọrịta na saịtị ahụ.
Ọ pụtara ịbụ ezigbo ihe ịga nke ọma, na ọ fọrọ nke nta Ndị nkwado 170,000 na Facebook na Twitter dika nke May gara aga na profaịlụ asatọ Twitter.
N'agbanyeghị na ike gwụrụ gị? Anyị nwere ụfọdụ ndụmọdụ iji jide n'aka na ahụmịhe ichu nta Ahịa gị dị oke mma:
Chọọ Ngwaahịa Yiri
Nke a bụ enweghị ike ịwụli nzọụkwụ mbụ tupu ị na-eme atụmatụ ọ bụla na ngwaahịa Hunt, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ akwụkwọ mpịakọta rookie. Iwepụta oge iji nyocha ma chọpụta otu ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị mmadụ si ere ahịa ọrụ ha, ruo na taglines, bụ mmalite dị mkpa. Rịba ama catchphrases ndị ahụ, mana echefula otu ha si mepụta peeji ọdịda ha. Ekwesịrị ịtụle ihe ọ bụla tupu iwere ya, dị ka ịgbanye onwe gị n'ebe ahụ ga-akwụsị na ọdachi. Mara ihe.
Mgbe ụlọ ọrụ m nwara ịmalite na Hchụ nta Productchụ nta, anyị dị ihe dị ka afọ 4 ma guzobe. Anyị gbalịrị ike anyị niile ịkụziri ndị ọrụ DIY mobile onye wuru ngwa bụ nnukwu ọrụ mana ihe ọhụụ abụghị na ọ ga - abụ ihe ọhụụ ọhụụ na - emeghị ka anyị nwee ihe ịga nke ọma. Yabụ, isi okwu ebe a, gbaa mbọ hụ na ị na-ewepụta ihe ọhụụ ọ bụghị ihe etinyererịrịrị na ichu nta nke ngwaahịa tupu nke ahụ enweghị nnukwu nsonazụ.
Ọ dị mma ịmụta ihe n’ihe ndị i mejọrọ. Ọ ka mma ịmụta ihe n’ihe ndị ọzọ mejọrọ. Warren Buffett
Chọta ndị na-emetụta gị
Zọ ọzọ iji nwee ihe ịga nke ọma na weebụsaịtị bụ ịchọta ndị na - eme ihe ike - ndị mmadụ nwere ike ịmasị mmasị na mmalite ọhụụ nke edepụtara na saịtị ahụ. Ọ bụ ụkpụrụ maka ndị ejikọtara na ụlọ ọrụ na-ebido mmalite iji gbaa ndị ọrụ ha ozi ịntanetị na-eme ka ha nwee obi ụtọ na ebumnuche ibuli ngwaahịa ọhụrụ. Maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ọ dị mma ịme otu ihe ahụ na ndị ezinụlọ na ndị enyi. (Ọbụna ma ọ bụrụ na nwanne nne gị nwanyị amabeghị ozi email. Ntuli aka ọ bụla dị mkpa, cheta.)
Enwere oke, agbanyeghị. Untchụ nta doesn'tchụ nta anaghị ekwe ka ụlọ ọrụ zụta otu ntụpọ na ibe saịtị ahụ. Enweghị nsogbu otu egwu egwu dị egwu, ha ka ga-enwerịrị ogo dị elu site na nkwalite dị ka onye ọ bụla.
Buru Onye N’agba N’uche Mgbe Creatmepụta Ihe maka Saịtị
N'adịghị ka weebụsaịtị ndị ọzọ, algọridim nke ngwaahịa na-adabere na ọsọ. Ozugbo elekere saịtị ahụ kụrụ etiti abalị PST, ụbọchị ọhụụ ga - amalite ma kpochapụ ndị na - atụ vootu kwa ụbọchị site na ụbọchị gara aga. Yabụ, ọ dị mkpa maka ndị mmepe ahụ ijide n'aka na edobere ihe niile ma dịkwa njikere ozugbo edere ngwaahịa ahụ ma ị ga-enwe ebere nke ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na Hchụ nta ngwaahịa anaghị ekwe ka ntughari ma ọ gwụla ma n'ọnọdụ ụfọdụ (edepụtara n'elu), otu ụbọchị na-ekpebi ma mmalite gị ọ ga-aga nke ọma ma ọ bụ daa.
Enwere ike iji nyocha ndị ọrụ mee ihe maka uru gị
Ndị mmepe nwere ọgụgụ isi na ndị na-emepụta ihe na-eji nyocha iji wusie ngwaahịa ike. Ndị na-emepụta akụkọ agwala akụkọ banyere etu beta mma nke ngwa ekwentị ha siri dị mma site na ịgụ ihe na saịtị ahụ na idozi chinchi ndị ahụ. Ibe ajuju nke ndi ahia na-ekwusi ike na enwere ike idenye ngwa ma oburu na mmelite a bu 'oke' - ihe di nkpa ohuru di iche karie tweak ebe ma obu ebe a. Ndị na-elekọta obodo ga-ajụ obere mmelite, yabụ buru nke ahụ n'uche.
Ihe omuma atu nke ihe ndi anabatara na-eme ka ndi mmadu megharia ihu site na ihe ndi ozo gbasaa iji nwekwuo nnweta na otutu nyiwe, ikekwe uzo ohuru nke weebụsaịtị. Ọbụna akara ngosi ọhụụ bara uru!
Naanị lee anya Obere igbe. Faịlụ-nkekọrịta ngwa bụ ugbu a afọ abụọ n'ime ya atọ iteration, na otutu nsụgharị maka nyiwe dị iche iche mgbe launching dị ka Mac-naanị ikpo okwu.
Oge Mbupute Gị nke Ọma
Smart webmasters ga-ahụ na ịkwadebe ihe mmalite nke ọma. Akụkọ na-adịghị mma banyere mmalite adịghị njikere maka ọnya na-aga n'okporo ụzọ n'ihi ikenye na ichu nta arechụ nta na-adịkarị, dị ka onye nrụpụta nke ndị iro gị Glitter nke ndị mmadụ nwere mmasị.
Jide n'aka na mgbe ị na-eme atụmatụ ịmalite, ihe niile edozila ka ịchọrọ. Ọ bụrụ na ịnweghị njikere ma bụrụ ndị ọrụ nwere nsogbu na ngwa ahụ, dịrị njikere maka ọtụtụ akara ngosi na-egosi chinchi na ịde aka ekpe na aka nri. Mgbe ahụ akara aka nke ngwa ahụ ga-adị n'aka ndị na-elekọta saịtị ahụ mgbe ị na-ezitere ha ụdị nke emelitere.
Ndị njikwa kwesịrị ịma ihe niile ị zubere na Version 2.0 iji nye nsogbu ka ịdebanye aha gị. Gbalia ihu na inweela ihe omuma.
Emela ya naanị ya na-enweghị Media Ndi ana-akpo
Ndị ọrụ untchụ nta Veteran maara nke ọma na ịmalite mmalite, ha enweela kọntaktị na mgbasa ozi na-enyere mgbasa ozi aka. Nke a apụtaghị na ịnweghị ike i emomi ha. Mara ndị na-ede blọgụ ma ọ bụ ndị nta akụkọ ọ bụla kpuchie ihe mbụ nke gị na nyocha dị mma? Dezie email iji mee ka uche ha banyere mmalite ọhụrụ ahụ ma zipụ ha n'ụbọchị mbido.
The ozi nwere ike ọbụna akpaghị aka ịchekwa oge ụfọdụ na ihe kwesịrị ịbụ ọrụ ụbọchị. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji nweta mbido ọhụụ gị n'ihu ọtụtụ bọọlụ anya na mkpuchi dị ukwuu, ma nwekwaa nnabata ndị ọzọ.
Echiche na Ndụmọdụ Ikpeazụ
Iburu ihe ndị a n’uche bụ ọtụtụ ihe ị ga-atụle maka onye ọ bụla, ma ya fọdụzie ịchụ nta ngwaahịa Hunt rookie. Ọ bụrụ n'ịjikere, na-emeso ihe ọ bụla ndị ọrụ tụbara gị bụ snap. Ndi amanye itinye aha ya mgbe agha buru ibu gara agaw? Nsogbu adighi, ka anyi juo mmelite anyi na onye njikwa obodo anyi. Prekwadebebeghị maka mmasị buru ibu karịa? Ihe omumu mutara maka oge ozo. Emechakwa, ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi na-amụta site na mgbochiume na mmejọ ga-aka mma oge ọzọ. O ruru mgbalị.
Ihe atụ ndị a, nke ọma na nke ọjọọ, na-egosi etu ichu nta canchụ nta nwere ike ịdị. Onye ọ bụla na - emepe emepe chọrọ ibido mbido ga - eme nke ọma ileba uru saiti ahụ nyere. Mwepụta ngwaahịa dị mfe nwere ike ịbụ oge opupu ihe ubi maka ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ n’ịjikere ma dịkwa njikere ịga, uru nke Hchụ nta Ngwaahịa bụ nke gị ịnụ ụtọ ya. Jisie ike!
Tags: onye wuru ngwaMwepụtaigbe igbeịchụ nta ngwaahịammepụta ngwaahịangwaahịamalitembido mbido